Xuquuqda Xubnaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xuquuqda Xubinta
Adiga oo ah xubin ka-faa'iideysiga Medicare ee CHPW, waxaad leedahay xuquuq.
Our Ogeysiiska Dhaqanka Asturnaanta ee Medicare wuxuu kuu sheegayaa sida aan u isticmaalno una wadaagno macluumaadkaaga. Waxa kale oo ku jira xuquuqdaada asturnaanta caafimaadka. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad dib u eegto kanaga Xuquuqda Xubinta iyo Waajibaadka inay kaa caawiso inaad hubiso inaad hesho daryeelka ugu fiican.
Ogow Xuquuqdaada iyo Macluumaadkaaga Caafimaadka ee Ilaalinta
Macluumaadkaaga caafimaadka ee difaaca leh (PHI) waxaa ilaaliya sharciga federaalka. PHI-gaaga waxaa ku jira macluumaad sida magacaaga, lambarkaaga xubin, ama macluumaad kale oo lagu garto.
Fadlan eeg "Foomamka Xubnaha Medicare" ee hoose si aad u hesho macluumaad ku saabsan sida loo soo gudbiyo codsi.
Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato qaab kale oo isgaarsiineed (tusaale ahaan, boostada caadiga ah, emaylka, taleefanka, fakiska) ee Macluumaadkaaga Caafimaadka ee la ilaaliyo ama isgaarsiinta PHI-gaaga oo lagu geeyo meel kale. Waxaad ku sameyn kartaa hadal ahaan adoo wacaya Adeegga Macaamiisha ama qoraal ahaan ugu soo dira fakis (206) 521-8834 ama emayl u dir [emailka waa la ilaaliyay]. Waxaad isticmaali kartaa Codsiga CHPW ee Foomka Isgaarsiinta Qarsoon ama Foomka Wakiilka Caymiska ee Xafiiska Gobolka Washington.
Adeegsiga, Bixinta, iyo Amniga Macluumaadka Caafimaadka ee La Ilaaliyay:
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waxaa ka go'an ilaalinta PHI-gaaga oo amaan ah. Hoos waxaa ku yaal siyaabo ay CHPW u ilaaliso PHI:
Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyad si aan u difaacno PHI-gaaga
Xafiiskayagu jidh ahaan waa amni
CHPW waxay tababartaa shaqaalaha si loo ilaaliyo asturnaanta iyo amniga PHI
Waxaan xadideynaa kuwa arki kara PHI. Kaliya shaqaalaha u baahan inay ogaadaan PHI ayaa isticmaali kara.
Waxaan xadideynaa waxa aan kaga wadahadleyno taleefanka
Waxaan ku xafideynaa macluumaadka caafimaadka oo qoran khaanad markii aan la isticmaalin
Waxaan ilaalineynaa kumbuyuutarradeena marwalba
Waxaan macluumaadka caafimaadka ugu dirnaa emayl qaab aan la aqrin karin haddii qof kale arko emailka
CHPW waxaa ka go'an inay sameyso inta karaankeena ah si looga hortago, loo ogaado, loona saxo khayaanada daryeelka caafimaadka. Ka warbixi xaalad u noqon karta khayaanada daryeelka caafimaadka. Markaad ka warbixiso xaalad laga yaabo inay noqon karto khiyaano daryeel caafimaad, waxaad sameyneysaa qaybtaada si aad uga caawiso inaad lacag u keydiso nidaamka daryeelka caafimaadka. Baro astaamaha digniinta iyo waxa loo baahan yahay. Haddii aad ka shakisan tahay wax isdabamarin, qashin ama xadgudub, waxaad noogu soo wargelin kartaa khadka tooska ah, si qarsoodi ah
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan ka warbixinta khayaanada daryeelka caafimaadka.
Dardaaranka hore wuxuu xulashooyinkaaga daryeelka caafimaadka u qorayaa qoraal wuxuuna u sheegayaa dhakhtarkaaga iyo qoyskaaga daryeelka nooca aad samaynayso ama aadan rabin. Inaad haysato dardaaran hore waxay ka dhigan tahay kuwa aad jeceshahay ama dhakhtarkaagu kuu samayn karo xulasho caafimaad adiga oo ku salaynaya waxaad rabto.
Cabashooyinka & Rafcaannada
Waxaan u tixgelinaynaa welwelkaaga si dhab ah. Waxaad ku xareyn kartaa cabasho qorshahaaga daryeelka caafimaadka haddii aadan ku qanacsaneyn sida laguula dhaqmay, tayada daryeelka ama adeegyada aad heshay, ay dhibaato kaa haysato helitaanka daryeelka, daaweynta ama daawada aad u baahan tahay oo la diiday, ama aad qabto arrimo biil ah .
Fikradda labaad waa talo soo jeedin ka timid dhakhtar aan ka aheyn dhakhtarkaaga hadda. Ra'yi labaad ayaa xaqiijin kara ama su'aal ka keeni kara cudurka dhakhtarka koowaad iyo qorshaha daaweynta. Tani waxay ku siin kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cudurka ama xulashooyinka daaweynta ee kale ee la heli karo. Waqti kasta waxaad ka heli kartaa fikrad labaad oo ku saabsan daryeelkaaga caafimaad ama xaaladaada. Ka wac Adeegga Macaamiisha 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 711) si loo ogaado sida loo helo fikrad labaad.
Foomamka Xubnaha Medicare
Adeegso foomamkan soo socda si aad u cusboonaysiiso macluumaadkaaga oo aad u oggolaato cidda geli karta Macluumaadkaaga Caafimaadka ee Ilaalinta ah.
Oggolaanshaha Siidaynta Macluumaadka Caafimaadka ee La Ilaaliyo
Ruqsad siideynta Macluumaadka Caafimaadka ee la ilaaliyo - Isbaanish
Codsi in la saxo ama wax laga beddelo Macluumaadkaaga Caafimaadka ee Difaaca ah
Ka warbixi Foomka Dhacdada Asturnaanta / Amniga
Si aad u codsato macluumaadkaaga caafimaadka, buuxi foomka ku habboon una dir:
Xuquuqdaada Markii Diiwaangelinta Laga Bixiyo
Dukumiintiga Caddaynta Daboolida qorshahaaga waxaa kujira macluumaad kusaabsan xuquuqda iyo waajibaadka xubinta iyo qorshaha marka lagaarsiiyo caymiska qorshaha.
Waxaad iska bixin kartaa oo keliya inta lagu jiro muddooyinka u qalmidda doorashooyinka sida Muddada Doorashada Sannadlaha ah (Oktoobar 15 - Diseembar 7), ama haddii aad u-qalanto muddada Doorashada Gaarka ah (SEP). Muddada Diiwaangelinta Dheecaanka Medicare (MADP), laga bilaabo 1da Janaayo ilaa Febraayo 14keeda waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku noqoto Medicare-ka Asalka ah. Markaa waxaad xaq u yeelan doontaa SEP oo waxaad codsan kartaa isqorista PDP.
Dib u eeg Xuquuqda Xubinta Markay Diiwaangelinta Ka Dib inaad waxbadan ka barato xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga.
Haddii aad aamminsan tahay in xuquuqdaada gaarka ah lagu xad gudbay, waxaad dacwad noogu soo gudbin kartaa taleefan ama boosto. Kumana ciqaabi doono sinaba haddii aad dacwad gudbiso. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa wixii su'aalo ah ee ku saabsan asturnaanta iyo amniga PHI-gaaga.
Xubnaha hadda: 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 711)
laga bilaabo 8:00 am ilaa 8:00 pm, toddobo maalmood usbuucii.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 24, 2021